Barnaamijka caanka ah – Bogga 20 – Windows – Vessoft
WindowsBarnaamijka caanka ah – Bogga 20
ImageJ – waa aalad awood u leh falanqaynta faahfaahsan iyo ka baaraandegista feylasha sawirrada. Softiweerku wuxuu leeyahay set badan oo shaandhayn ah, faylal, iyo qalab kale.
software ah in uu ordo images disk oo aan isticmaalka drive indhaha. software The abuuraa drives dalwaddii ah in mid yihiin in CD ama DVD drives jirka.
eMule – aalad caan ah oo lagu wadaago feylasha internetka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kordhiso xawaaraha kala soo degsiga adoo isticmaalaya nidaam qiimeyn ah.
Agabka awood badan inay dhexda xirmooyin shabakadda. Sidoo kale software uu leeyahay hawlaha shaandhaynta baakadda iyo taageertaa qabashada baakadda fog.
Qalabka dhameystiran ee horumarka ciyaarta ee nidaamyada hawlgalka ee kala duwan. Softiweerku wuxuu leeyahay go’an muuqaal garaafyo iyo cod ah si loo gaaro naqshadeynta ugu tayada badan ciyaarta.
Software si ay ula socdaan xaaladda kombiyuutarka. Sidoo kale software ka kooban yahay qalabka si loo xakameeyo iyo qabsato xuduudaha ka kooban yahay kombiyuutarka.
iSpy – softiweer qalab fara badan leh oo ay la kaashanayaan tikniyoolajiyadda casriga ah, oo loogu talagalay ilaalada fiidiyowga ee ku saabsan shay ama aag gaar ah.
Dhis 2 – tifatire qalfoof leh si aad u abuurto 2D ciyaaraha noocyada kaladuwan iyo kakanaanta. Softiweerku wuxuu siiyaa habraac horumarineed oo la fududeeyay dadka isticmaala iyagoon lahayn xirfadaha barnaamijyada.
Tababaraha gaadiidka internet. Sidoo kale software awood u la qabsato xawaaraha wareejinta xogta isla markaana kormeertaa qaabka la xiriira internet-ka.